Akụkọ - Ihe achọrọ maka nchekwa nchekwa nke aminoguanidine hydrochloride
Ihe choro maka nchekwa na nchekwa nke aminoguanidine hydrochloride
Chọrọ maka nchekwa ojiji
Lezienụ anya na nchekwa mgbe ị na-eji aminoguanidine hydrochloride, n'ihi na ọ bụ kemịkal na-egbu egbu. Ọ bụrụ na enwere nsogbu nchekwa, ọ nwere ike ịnwe oke mbibi. Ihe ndị a bụ ihe ndị achọrọ maka iji nchekwa.
1. Anyị kwesịrị ịrụ ezigbo ọrụ na nchedo nchekwa. Ndị ọrụ ahụ kwesịrị iyi akụrụngwa nchedo iji zere ịkpọtụrụ kemịkal ndị na-egbu egbu.
2. Mee ezigbo ọrụ na mgbochi mgbochi mmiri. Ozugbo leakage mere, ọ ga-eweta egwu nchekwa na gburugburu ebe obibi na ndị ọrụ.
3. Mgbe ejiri ya, jikwaa gloves nke ekpughere na aminoguanidine hydrochloride.
N'okwu, ojiji nke aminoguanidine hydrochloride nwere nlezianya chọrọ yana enweghị ike iji ya rụọ ọrụ na nzuzo. Imezi ihe nwere ike ime ka nchekwa dị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, kpọtụrụ ọkachamara na-emepụta ọgwụ.
Dị ka kemịkal na-egbu egbu, aminoguanidine hydrochloride nwere nnukwu nchekwa gburugburu ebe obibi maka nchekwa. Ọ bụrụ na echeghị ya nke ọma, ọ dị mfe ịmetụta arụmọrụ na ọbụnadị kpatara ihe ọghọm nchekwa. Ekwesịrị ịkọwa isi ihe abụọ na-esonụ n'oge nchekwa.
1. Na-echekwa na mma ebe
Ebe ọ bụ na aminoguanidine hydrochloride ga-erekasị ma ọ bụrụ na ọ dị ọkụ, ọ bụkwa ihe na-egbu egbu, ọ ga-enwerịrị mmetụta na gburugburu ebe obibi mgbe ọ nwụsịrị. N'ihi ya, ọ ga-etinye ke mma ebe, nke mere na a ga-enweghị okpomọkụ volatilization.
2. Akara akara iche
Aminoguanidine hydrochloride ga-akwakọba ma kechie iche. Enweghị ike ịchekwa ya na kemịkal ndị ọzọ. E kwuwerị, ọ na-egbu egbu. Ọ dịkwa mkpa itinye akara ịdọ aka ná ntị nchebe na ebe ndị pụtara ìhè na ụlọ nkwakọba ihe. Nke a bụ ụzọ dị irè iji hụ nchekwa.
A kpachapụrụ anya maka nchekwa nke aminoguanidine hydrochloride ebe a. Mgbe ị na-echekwa, ị kwesịrị ị paya ntị na ya, ka ị wee hụ na arụmọrụ ahụ emetụtaghị.